Indunduma: "mhlawumbi eyona noveli inkulu kuluhlu lwezesayensi" | Uncwadi lwangoku
"Mhlawumbi yeyona noveli inkulu kuluhlu lwezenzululwazi", wachaza uHari Kuzru we Guardian (2015) ine Dune (1965). Ngokuqinisekileyo ingqondo kaFranz Herbert yeyona franchise eyaziwayo ngalo lonke ixesha. Ngaphezu koko, ukubaluleka kwayo kunye nefuthe kwinkcubeko yangoku kubonakala kwiisaga ezidumileyo ezifana Star Wars o Inkwenkwezi yetrek, umzekelo.
Umsebenzi wombhali waseMelika iye yavelisa ummandla omkhulu wendalo oboniswa kwiifilimu, kuthotho lweenkqubo zikamabonwakude, kwiimidlalo ezihlekisayo, nakwimidlalo yevidiyo kunye nemidlalo yekhadi, phakathi kwabanye. Inxalenye yobukhulu bayo kungenxa yegalelo labanye ababhali abagunyaziswe nguHerbert ukusuka ngo-1984. La mnikelo wongeze iinkcukacha ezithe kratya kwi-"Dunian cosmos" eyayingekho kwiinoveli zokuqala.
1 Uhlalutyo kunye nesishwankathelo sendalo yeDune
1.1.1 Ukupapashwa kunye namabhaso okuqala
1.2.1 Eminye imixholo ekuthethwe ngayo kwiinoveli zeDune
1.3 Ulandelelwano olubhalwe nguHerbert kunye nohlengahlengiso lweaudiovisual
1.3.1 I-trilogy yokuqala nguBrian Herbert kunye noKevin J. Anderson
1.3.2 I-trilogy yesibini nguBrian Herbert kunye noKevin J. Anderson (Iintsomi zeDune)
1.3.3 Ezinye iimpapasho ezatyobelwa kamva nguHerbert noAnderson
2 I-Synopsis Dune yeNcwadi (1965)
2.1 Ezinye izindlu kunye nabalinganiswa ababandakanyekayo
3 Ubume bendalo yombhali
3.1 Ukuzalwa, ubuntwana kunye nolutsha
3.3 Ukuthatha inxaxheba kwimfazwe kunye neempapasho ezibhaliweyo zokuqala
3.3.1 Amanye amajelo oshicilelo awayewasebenzela
Uhlalutyo kunye nesishwankathelo sendalo yonke ye Dune
Ngowe-1957, intatheli yaseMelika, umfoti kunye nombhali baba nomdla ukuze kutyalwe ngempumelelo ingca yaseYurophu kwiindunduma zonxweme lwaseOregon. Eli phulo, ligqitywe liSebe lezoLimo laseMelika, lamkhokelela ekubeni ukubhala "Bamisa Iisanti Ezishukumayo" ("Bayimisa intlabathi emanzi").
Nangona engazange alipapashe eli bali likhankanywe ngasentla, UHerbert waqhubeka nokuphuhlisa umbono wehlabathi eliyintlango elithwaxwa ziziduli ezihambayo okubangelwa kukutshatyalaliswa kwendalo. Ngo-1963, umbhali waseWashington wagqiba umbhalo wesandla we Ihlabathi leDune kunye nephephancwadi fanekiso yapapasha ngokothotho (ngoDisemba 1963 – ngoFebruwari 1964).
Ukupapashwa kunye namabhaso okuqala
Umbhalo-ngqangi waliwa ngabapapashi abangamashumi amabini anesibini, abasithethelelayo isigqibo sabo ekucingelwa ukuba intsonkothile yelo yelenqe. Nangona kunjalo, ngo-1965 iChilton Books yakhetha ukusungulwa kwayo kwifomathi yenoveli. Isihloko siphumelele imbasa ye-Nebula ye-1965 ehloniphekileyo kwaye kwabelwana ngayo Ukungafi kaRoger Zelazny ngembasa yeHugo ka-1966.
Ipanorama ye-US esentshona ecaleni kwe Amava kaHerbert nabantu bomthonyama baseMelika abumba umbono wezopolitiko Dune. Enyanisweni, umbhali wafunda ukuloba kunye neendlela ezivela kwiqela le-Hoh ngexesha lobutsha bakhe. Kwakhona, ukusukela ngo-1960 umbhali wencwadi wayelitshantliziyo elichasene nemfazwe nezixhobo zenyukliya, kunye nesikhundla sakhe esixhasa ukusekwa koMhla woMhlaba.
Ngokunjalo, uHerbert uphande nzulu ngemekobume yasentlango kunye nefuthe lokusingqongileyo kwisenzo somntu ukuze achaze intsebenziswano yomntu nendawo akuyo. Ngele ndlela, abahlalutyi boncwadi balatha kwimpembelelo ecacileyo yeencyclopedias kwi-ecology yale mihla (ISociology yeNdalo) kunye neesayikholoji zembali (Ukutshintsha kweNdawo yoMntu).
Eminye imixholo ekujongwe kuyo kwiinoveli ze Dune
Iimpembelelo zamaSilamsi nakuMbindi Mpuma
inkolo kunye nezomoya
Ulandelelwano olubhalwe nguHerbert kunye nohlengahlengiso lweaudiovisual
UFranz Herbert upapashe amacandelo amahlanu alandelayo: Dune uMesiya (1969) Abantwana beendunduma (1976) UThixo, uMlawuli weDune (1981) Abaqhekeki beDune (1984) kunye Indlu yesahluko: Dune (1985). Enkosi kubo, uHerbert wangeniswa kwiHolo yeNzululwazi yeFiction of Fame ngo-2006.. Akunanto, i-saga yahlengahlengiswa kwiscreen esikhulu kabini (1984 kunye no-2021) kunye nothotho oluphumelele amabhaso amaninzi.
Emva kokufa kukaFranz Herbert ngowe-1986. unyana wakhe uBrian kunye noKevin J. Anderson bathembele kwimibhalo-ngqangi engagqitywanga ngumbhali ukuba adibanise i-prequel trilogy ye Dune. Kwandula ke kwakhululwa enye i-trilogy ebonisa "umnqamlezo woluntu ngokuchasene neekhompyuter, oomatshini bokucinga, kunye neerobhothi ezinengqondo" (iminyaka eyi-10.000 ngaphambi kweziganeko zencwadi yokuqala).
I-trilogy yokuqala nguBrian Herbert kunye noKevin J. Anderson
Indunduma: House Atreides (1999)
Indunduma: Indlu yaseHarkonnen (2000)
Indunduma: Indlu yaseCorrino (2002).
I-trilogy yesibini nguBrian Herbert kunye noKevin J. Anderson (Iintsomi zeDune)
Indunduma: I-Butlerian Jihad (2002)
Indunduma: IMfazwe yoMatshini (2003)
Indunduma: Idabi laseCorrin (2004).
Ezinye iimpapasho ezatyobelwa kamva nguHerbert noAnderson
Abazingeli beDune (2006)
Iimbungu zesanti zeDune (2007)
UPawulos waseDune (2008)
Imimoya yeDune (2009)
Iingqondo zeDune (2014)
Abaqhubi beenqanawa zeDune (2016)
Indunduma: Inkosi yaseCaladan (2020)
Indunduma: Indlalifa yaseCaladan (2021)
Isishwankathelo sencwadi Dune (1965)
Dune Imiselwe kwikamva elikude kakhulu. Le noveli ichaza ungquzulwano lwangaphakathi kwi-intergalactic feudal empire ilawulwa yizindlu eziNoble, ezithi nazo zinike imbeko kwi-Imperial House Corrino. I-protagonist nguPaul Atreides, indlalifa encinci kuDuke Leto Atreides I kunye nentloko yexesha elizayo yendlu ephethe ifani yakhe.
Xa uPawulos nentsapho yakhe befudukela kwiplanethi Arrakis —eyahlukileyo kwindalo iphela enomthombo weziqholo—, ujonga unxibelelwano oluntsonkothileyo lwezopolitiko olukhoyo. Imiba yenkolo kunye ne-ecological nayo ikhona, kunye nefuthe lentlalontle yenkqubela phambili yezobuchwepheshe. Kulo mongo, i-genesis yeengxabano eziza kutshintsha i-destiny yabantu.
Ezinye izindlu kunye nabalinganiswa ababandakanyekayo
Abemi bomthonyama baseArrakis
I-Space Guild enamandla
I-Bene Gesserit Order, umbutho wabasetyhini oyimfihlo.
Ubume bendalo yombhali
Ukuzalwa, ubuntwana kunye nolutsha
Umthonyama waseTacoma, eWashington, eUnited States, uFrank Patrick Herbert Omnci. wazalwa ngo-Oktobha 8, 1920. Wakhulela kwindawo esemaphandleni nabazali bakhe, uFrank Patrick Herbert Sr. noEileen McCarthy. Ukususela kwasebuntwaneni wabonisa ukuba ingaba yintoni eyona nto ayithandayo ebomini: ukufunda kunye nokufota.
Ubuhlwempu buyichaphazele kanobom intsapho yakwaHerbert ngexesha lokuDodobala Okukhulu. Ngenxa yesi sizathu, ngowe-1938 wafudukela eSalem, eOregon, ehamba nomakazi. Pha, Waphumelela kwisikolo samabanga aphakamileyo saseNorth Salem waza wafumana imisebenzi yakhe yokuqala—ubukhulu becala njengomfoti. kwiphephandaba Oregon Statesman (enyanisweni Ijenali ye-Stateman).
Unoveli wexesha elizayo wayetshatile phakathi 1941 kunye 1943 kunye noFlora Lillian Parkinson, unina wezibulo lakhe, uPenelope. Kamva, watshata Ngowe-1946 kunye noBeverly Ann Stuart—de ukufa kwakhe kwi 1983-, awayenoonyana ababini naye: uBrian Patrick noBruce Calvin. Ekugqibeleni, UTheresa D. Shackelford wayengumfazi wokugqibela kaHerbert phakathi 1985 kunye ne1986, unyaka wokufa kombhali.
Ukuthatha inxaxheba kwimfazwe kunye neempapasho ezibhaliweyo zokuqala
UFrank Herbert usebenze njengomfoti wale yunithi Ulwandle Umkhosi waselwandle wase-US ngexesha leMfazwe Yehlabathi II. Lo msebenzi wawungowexesha leenyanga ezintandathu (wakhululwa ngenxa yokwenzakala entloko). Kamva, wazinza ePortland, eOregon, apho wasebenza khona I-Oregon Journal kwaye waqala izifundo zakhe (engazange agqibe) kwiYunivesithi yaseWashington.
Amanye amajelo oshicilelo awayewasebenzela
Ngo-1952, uHerbert wathengisa ibali lakhe lokuqala lenzululwazi, "ukhangela into, kwiphephancwadi Amabali okuqala. Okwangoku, uye wabamba izikhundla ezahlukeneyo-ukusuka kumfoti kunye nombhali ukuya kumhleli-kula maphephandaba kunye neemagazini ezilandelayo: Seattle Post-Intelligencer (1945-1946), Amaxesha eTacoma (1947) USanta Rosa Press Democrat (1949-1955) kunye ISan Francisco Examiner (1960–1966), phakathi kwabanye.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli » Dune
UGiorgos Seferis. Isikhumbuzo sokuzalwa kwakhe. imibongo ekhethiweyo
Elena Barges. Udliwano-ndlebe nombhali weThe Order of Master Goya